Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ọbịa ọbịa » Kedu ihe ịchọrọ ịma gbasara ịkwaga Dubai
Ịgbanwe ebe obibi gị na-abụkarị usoro siri ike ma na-ewe oge, karịsịa ma a bịa n'ịkwaga mba ọzọ. United Arab Emirates bụ obodo mepere emepe n'ụzọ akụ na ụba na teknụzụ. Ọ bụ oghe nye ụmụ amaala nkịtị na ndị ọchụnta ego, mana ọ bụghị ihe niile dị mfe ebe a. Isi mmalite - https://emirates.estate - ga-agwa gị gbasara nkọwa nke ịkwaga UAE.
Njirimara omenala nke Emirates
Ọnọdụ mba ụwa dị elu, akụ na ụba siri ike na ọnọdụ azụmahịa dị mma adịghị agbagha eziokwu ahụ bụ na UAE bụ obodo Muslim nwere ọdịnala nke ya.
Iwu ndị dị na Emirates siri ike nye onye ọ bụla: ndị obodo na ndị mba ọzọ. N'agbanyeghị na n'ihe gbasara ndị ọbịa, ọ na-atụgharị anya n'ọtụtụ ihe. Ọ pụtaghị na mmebi iwu siri ike ga-anọgide na-ataghị ntaramahụhụ. Ndị bi na Dubai na-eguzosi ike n'ihe nye ndị ọbịa na n'ọnọdụ nke a ọ na-atụ anya nkwanye ùgwù maka ụkpụrụ obodo.
Kedu atụmanya na-echere ndị mba ọzọ
Ọtụtụ ndị mba ọzọ kwagara UAE maka ebe obibi na-adịgide adịgide na-akpọ ọtụtụ ihe kpatara ya. Anyị na-atụ aro ka ịmata ya nke ọma.
Ọnọdụ akụ na ụba kwụsiri ike na ọnọdụ ego dị mma. Ihe na-akpata ọdịmma ego na-adọta akụkụ buru ibu nke ndị na-akwaga mba ọzọ. Ọnụ ọgụgụ dị elu nke ụgwọ ọnwa, enweghị ụtụ isi ego, yana ego kwụsiri ike, na-etolite ọnọdụ nke ịchọrọ ịgba mbọ;
Ntinye ego na-erite uru na ala na ụlọ. A na-emepe ụlọ ọrụ ezigbo ụlọ na Dubai nke ọma. A na-egosipụta nke a site na nnukwu ọchịchọ, ọrụ ntinye ego na mmụba na-aga n'ihu na ọnụ ahịa. N'ihi ya, ndị na-azụ ahịa ụlọ ahịa na-enweta ọ bụghị nanị ihe onwunwe magburu onwe ya maka ibi ndụ, kamakwa ihe bara uru;
Ụgwọ ọnwa dị elu. Ndị ọkachamara ruru eru na Dubai, dị ka ebe ndị ọzọ, na-eji ya kpọrọ ihe, ya mere ụlọ ọrụ mpaghara dị njikere ịkwụ ụgwọ nke ọma;
Mbugharị. E nwere ọtụtụ nhọrọ n'okpuru nke onye mba ọzọ nwere ike ịghọ nwa amaala nke Emirates: alụmdi na nwunye, ọmụmụ na mba, ọrụ, a ịrịba onyinye na mmepe nke mba na itinye ego na ezigbo ala na ụlọ;
Nchekwa dị elu. Ndị Emirates na-ebi 3rd ebe n'ihe gbasara nchekwa, ebe Dubai nọ na 8th ebe nke obodo kacha dịrị nchebe n'ụwa.
Onye ga-akwado maka ịkwaga
A ga-akwado ya maka onye ọ bụla nwere ego, enweghị ndekọ mpụ yana ezigbo akụkọ ntolite kredit.
Gịnị bụ ụkpụrụ obibi na Dubai
Dubai bụ obodo na-eduga n'ụwa n'ihe gbasara ụgwọ ọnwa, yana nke kacha baa ọgaranya na Emirates. Ọnụ ahịa ezigbo ala na Dubai na-amalite site na USD 3,000 ruo USD 8,100.
Ịzụta ezigbo ala na UAEỊ nwere mmasị na ihe onwunwe maka ọrịre na UAE? Chọọ ụlọ nrọ site na ọtụtụ narị nhọrọ na webụsaịtị Emirates.Estate. N'ebe a, ị ga-ahụ naanị atụmatụ kacha mma sitere n'aka ndị nwe ụlọ gosipụtara na ndị mmepe buru ibu nke UAE. Maka ozi ndị ọzọ gbasara ịkwaga na ịzụrụ ezigbo ala na Dubai, biko kpọtụrụ onye njikwa ụlọ ọrụ ahụ.